Qeybta:Ogaysiiska6 min akhris
Muuqaalka Muuqaalka Magaca McKnight Wuxuu Leeyahay Jim Denomie 2019 Farshaxanka Quruxda Badan
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay u dooratay farshaxanka muuqaalka ah ee Jim Denomie inuu helo Abaalmarinta Farshaxanka 2019 ee mudan, hibo $ 50,000 ah oo loo sameeyay in lagu sharfo farshaxanka Minnesota oo door weyn ka qaatay nolosha dhaqanka ee gobolka. Denomie, oo xubin ka ah Kooxda Lac Courte Oreilles Band ee Ojibwe, waxay isku daraysaa muuqaallo muuqda iyo hub ka dhigis ku dheehantahay sawirada sheeko ee xoogga leh ee casuumaya aragtida cusub ee dhacdooyinka taariikhiga ah iyo dhacdooyinka casriga ee nolosha Asaliga iyo nolosha Mareykanka.
"Minnesota waa hoyga Jim Denomie, taariikhduna waxay dhiirrigelisay qaar badan oo ka mid ah sawirradiisii ugu awoodda badnaa," ayay tiri Kate Wolford, oo ah madaxweynaha ururka McKnight Foundation. Maanta, saamaynta uu ku leeyahay iyo aragtidiisa farshaxanka ayaa ka durugsan gobolkayaga. Waxaan ku faraxsanahay inaan aqoonsano farshaxan ku xidhnaa dhaqanka Anishinaabe ee sheeko-sheegashada oo si qoto dheer ugu hawlan diiwaangelinta maanta. Sheekadiisa waxay xasuusineysaa in hal-abuurnimada iyo is-muujinta ay badali karaan taranka nolosheenna. ”
Denomie waa farshaxankii ugu horreeyay ee Abti Mareykan ah oo loo xushay Abaalmarinta Farshaxanka Quruxda badan tan iyo markii la aasaasay 1996.
Isagu waa sawir-qaadis caan ah oo mar ka go'an abuurista shaashad cusub maalin kasta ka dib shaqada isaga oo ah dhammaystirka qashin-qubka. Denomie waxay kasbatay sumcad caalami ah oo ku saabsan sawirada taariikhiga sheeko ee soo saarta isku dhaca u dhexeeya dhaqamada asaliga iyo gumeysteyaasha Yurub. Iyada oo la adeegsanayo burush cad iyo sawir midab leh oo u muuqda inay gariirayaan, ayaa sawirrada Denomie ay yihiin kuwo lagu qoslo oo lagu qoslo, faahfaahinta sheekooyinka xiisaha leh, sawirrada xayawaanka, tixraaca dhaqanka pop-ka, iyo astaamaha lagu garan karo iyo halyeeyada. Denomie wuxuu ku tilmaamay shaqadiisa "hadal sarbeeb ah", qaabkiisuna wuxuu barbar dhigay isbarbardhiga dhaqankii sheekooyinka ee Buugaagta Hogaanka Mareykanka iyo ranjiyeyaasha sida Hieronymus Bosch iyo Pieter Bruegel.
Oz, Degdeg, 2017, 98 x 140 inji, saliid shiraac, ururinta: Matxafka Minnesota ee Fanka Mareykanka, xurmada farshaxanka iyo Bockley Gallery
"Shaqadda Jim waa qaab casri ah oo runta loo sheego," ayay tiri Lori Lea Pourier, madaxweynaha / madaxa Fund First First Fund iyo xubin ka mid ah guddiga xulashada Abaalmarinta Farshaxanka. “Wuxuu fiiriyaa maaddooyinka sida aadka ah u adag sida Dhaawaca Jilibka iyo Joogtada Dhagxaanta leh, laakiin badanaa wuxuu leeyahay qaab aad u qosol badan, iyo midabo kaa soo jiidan kara xiisadda. Waxaan u arkaa inuu yahay joornaaliiste dagaal oo casri ah, qabana oo keydiya sheekooyinka 100ka sano ee soo socota cod casri ah. ”
Denomie wuxuu ku dhashay 1955 deegaanka Lac Courte Oreilles Reservation ee Hayward, Wisconsin, Denomie wuxuu u guuray Minneapolis isagoo wiil ah kadib furitaankii waalidkiis — ruxitaan sababay qeyb kamid ah culeyska barnaamijyada qasabka ah ee dowlada ee ku qasbay muddadii 1960-yadii. Waxaa hore loo aqoonsan yahay inuu yahay farshaxan da 'yar oo hibo leh oo ay ku dhiirigelisay hooyadeed inay sii wadato iibsiga agabyada farshaxanka, Denomie waxay ka tagtay dugsiga sare ka dib markii lataliye hagitaan ah uu u sheegay inaysan mustaqbalka wax farshaxan ah ku jirin. Labaatan sano, Denomie wuxuu ku noolaa xirfadaha dhismaha ka hor inta uusan galin Jaamacadda Minnesota oo uu iska qoro koorsada farshaxanka ee loo baahan yahay. Halkaas, wuxuu dib u helay aragtidiisa faneed isaga oo cusbooneysiinaya xiriirradii uu la lahaa dhaqankiisa Asalka.
Denomie, wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo sawirada wax yar kadib markii uu qalin jabiyay ku qaatay shahaadada koowaad ee cilmiga farshaxanka. 1995. “Muddo dheer, aad baan uga xanaaqay la-taliyahaas anoo aan u taageerin riyadeyda, iyo inaan farsamada iska daayo muddo 20 sano ah. Ma aqaan haddii ay iga dhigtay farshaxan wanaagsan, laakiin hadda waxaan qabaa inay tahay inaan qaado jidka aan ku socday si aan u gaaro halka aan maanta joogo. ”
Shaqada Denomie waxaa lagu soo daray ururinta Machadka Farshaxanka ee Minneapolis, Xarunta Walker Art Center, iyo Matxafka Weisman Art ee Minneapolis; Matxafka Minnesota ee Fanka Mareykanka ee Saint Paul; Matxafka Denver Art; Matxafka maqalka ee Phoenix; iyo Matxafka Eiteljorg ee Indianapolis, iyo qaar kale oo badan. Shaqadiisa sidoo kale waa lagu soo bandhigaa hoolka McKnight Foundation. Wuxuu ku guuleystay abaalmarino badan oo ay ka mid yihiin saaxiibtinimo farshaxanimo oo ka socota Bush Foundation (2008) iyo McKnight Foundation (2012, 2018); Farshaxanka Farshaxanka Qaranka, Farshaxanimada Hogaanka Dhaqanka & Dhaqanka, Vancouver, Washington (2018); iyo Deeq Bixinta Farshaxanimo oo ay ka soo qaateen Guddiga Farshaxanka Gobolka Minnesota (2018). Sanadkii 2015-kii waxaa laga siiyay deeqda rinjiyeyaasha iyo sawir-qaadeyaasha ka socda Mu'asasadda Joan Mitchell, iyo sanadkii 2017 wuxuu dhammeystirey barnaamij farshaxan-guri oo ku yaal Xarunta Joan Mitchell ee ku taal New Orleans.
Antidote, 2006, 18 x 24 inji, saliida shiraaca, aruurinta khaaska ah, xurmada farshaxanka iyo Bockley Gallery
Shaqadiisa ayaa si balaadhan loogu muujiyey dalka Mareykanka, oo ay ka mid yihiin bandhigyo ka dhacay Chicago, Los Angeles, New York City, iyo Seattle. Sannadka soo socda, shaqadiisa ayaa laga soo bandhigi doonaa bandhiga New Zealand waxaana lagu dari doonaa 21-aad ee 'Contemporary Art Biennial Sesc_Videobrasil' | Munaasabadaha Jaalliyadaha Samaysan ee São Paulo, Brazil.
Denomie, waa 64 jir, waxay ku nooshahay Franconia xaaskiisa, Diane Wilson, oo ah farshaxan saaxiibkiis ah iyo qoraa xusuus Gaadhiga Ruuxa: Safarka Safarka Hore ee Dakota.
Denomie waxaa xushay gudi xubno ka ah bulshada oo leh aragti ballaadhan iyo aqoon ku saabsan fanka iyo dhaqanka kala duwan ee gobolka. Golaha waxaa ka mid ahaa Lori Lea Pourier, madaxweynaha / madaxa fulinta, maalgelinta First Peoples; Sandra Agustin, choreographer iyo lataliyaha farshaxanka; Eleanor Savage, maamulaha barnaamijka, Jerome Foundation; Rohan Preston, jilitaanka naqdinta fanka, Star Tribune; iyo Brian Frink, farshaxan iyo guddoomiye, Waaxda Fanka, Jaamacadda Minnesota State, Mankato.
The Abaalmarinta Farshaxanka aqoonsan yahay farshaxan-yahannada doortay inay noloshooda iyo mustaqbalkoodaba ka qabtaan gudaha Minnesota, taas oo ka dhigaysa gobolkeenna meel dhaqameed qani ku ah. In kasta oo ay leeyihiin karti iyo fursad ay ku sii wataan shaqadooda meelo kale, farshaxan yahannada waxa ay doorteen in ay sii joogaan - oo ay sii joogaan, waxay sameeyeen isbadal. Waxay asaaseen oo xoojiyeen ururada farshaxanka, dhiirigeliya fanaaniinta da’da yar, iyo soo jiidashada dhagaystayaasha iyo maamulayaasha. Waxa ugu fiican, waxay sameeyeen farshaxan cajiib ah, oo fikir xambaarsan. Ujeedada maalgelinta farshaxanka ee McKnight waa in la taageero farshaxanka shaqeynaya ee abuuraya kuna biiriya bulshada firfircoon. Barnaamijka Farshaxanka 'Foundation' Arts Arts wuxuu ku dhisan yahay aaminaada ah in Minnesota ay sii fiicnaato markii farshaxannadeedu wanaagsanaadaan Abaalmarinta Farshaxanka Qaddarintu waxay u tagtaa hal farshaxan oo reer Minnesota ah sannad kasta.
Mu'asasada 'McKnight Foundation', oo ah aasaaska qoyska ee fadhigiisu yahay Minnesota, waxaa ka go'an inay horumariso cadaalad dheeraad ah, hal abuur, iyo mustaqbal aad u badan halkaasoo ay dadku ku nool yihiin Danaha barnaamijyada waxaa ka mid ah dhaqaalaha gobolka iyo horumarinta bulshada, farshaxanka iyo farshaxanka Minnesota, sinaanta waxbarashada, kaqeybgalka dhalinyarada, cimilada Midwest iyo tamarta, tayada biyaha wabiga Mississippi, cilmi baarista maskaxda, cilmi baarista dalaga caalamiga, iyo hab nololeedka miyiga. Waxaa la aasaasay 1953 oo ay si madax-bannaan u siisay William iyo Maude McKnight, Mu'asasada waxay leedahay hanti qiyaastii ah $ 2.3 billion waxayna bixisaa qiyaastii $ 90 milyan sanadkii.